विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाबारे भ्रम हटाउन सार्वजनिक गर्‍यो यी १५ सुझाव::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
कोरोना भाइरस ‘कोभिद–१९’ हाल ८५ भन्दा बढी मूलुकमा फैलिएको छ। यसको संक्रमणबाट आइतबारसम्म ३५ सय मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १ लाख ५ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। अहिलेसम्म ५८ हजारभन्दा बढि संक्रमित निको भइसकेका छन्।
कोरोनाको प्रकोप विश्वव्यापी बन्दैजाँदा यस भाइरससँगै यसबारेको बिभिन्न भ्रम र हल्लाका कारण पनि त्रास झन बढेको यस क्षेत्रमा संलग्न निकायहरुले बताएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोनाबारे सचेतना जगाउनु पर्नेमा भ्रामक अफवाह फैल्याउने कार्य निन्दनीय भएको बताएको छ। डब्लूएचओले कोरोनाबारे फैलिएका भ्रम हटाउन हालै १५–बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ। गलत अफवाहलाई चिर्न पनि ती १५–बुँदे जानकारी सम्प्रेषित गर्न आवश्यक भएको डब्लूएचओले बताएको छ।
यस्ता छन् डब्लूएचओका जानकारीः
१.चिसो मौसम र हिउँले कोरोना भाइरस मार्दैन
चिसो मौसम र हिउँले कोरोना भाइरस मार्छ भन्ने भ्रमहरु फैलिएका छन्। त्यसमा सत्यता छैन। कोरोनाबाट बँच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको पटकपटक हात धुनु हो। अल्कोहल मिसिएका ह्यान्ड सेनिटाइजर समय समयमा हातमा लगाउनुपर्छ र साबुन पानीले हात धुनुपर्छ।
२.तातो पानीले कोरोनाबाट जोगाउँदैन
तातो पानीले स्नान गर्दा कोरोना भाइरसबाट बँच्न सकिन्छ भन्ने भ्रम छ। नुहाउँदा हाम्रो शरीरको तापक्रम ३६.६ डिग्री सेल्सियसदेखि ३७ डिग्री सेल्सियसको हुन्छ। वास्तवमा ज्यादै तातो पानीले नुहाउँदा तपाइँको शरीर जल्नसक्छ यसले कोरोनाबाट जोगाउँदैन।
कोभिद–१९ बाट जोगिन हात धुनु नै उपयुक्त उपाय हो। हामीले हातले आँखा, मुख र नाकमा छोइरहेका हुन्छौं। हात धुँदा हामीले भाइरसलाई हटाउनसक्छौं त्यसकारण संक्रमणको खतरा टरेर जान्छ।
३.नयाँ कोरोना भाइरस चीनमा उत्पादित सामाग्रीबाट सर्दैन
कोरोना चीनमा उत्पादन भएका सामाग्रीबाट सर्छ भनेर हल्ला फिँजिरहेका छन्। त्यो सत्य होइन। कोरोना भाइरस जमीनमा केहीघण्टा अथवा केही दिनसम्म बाँच्नसक्छ तर चीनमा उत्पादित सामाग्रीले नै भाइरस सर्छ भन्नु गलत हो। कोरोना भाइरस मार्नका लागि हामीले औषधिको प्रयोग गर्नसक्छौं।
कोरोना प्रभावित जुनसुकै राष्ट्रबाट निर्यात भएका सामाग्रीमा कोरोनाको संक्रमण भएको हुनसक्छ। उक्त सामाग्रीहरुलाई औषधिको प्रयोगगरी कीटाणुरहित बनाउन सकिन्छ। यदी जमीनमा कोरोनाको संक्रमण छ भन्ने लागेमा त्यसलाई पनि औषधिले भाइरसमुक्त गर्न सकिन्छ। तर त्यसपछि हात धुन बिर्सनु हुँदैन। अल्कोहल मिसिएका ह्यान्ड सेनिटाइजर समय समयमा हातमा लगाउनुपर्छ र साबुन पानीले हात धुनुपर्छ।
४. कोरोना भाइरस लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ?
हालसम्म लामखुट्टेको टोकाइबाट कोरोना भाइरस सरेको प्रमाण भेटिएको छैन। कोरोना भाइरस स्वासप्रस्वासजन्य भाइरसबाट सरेको देखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण कफ र रुघाखोकी लागेका मानिसबाट निस्कने ¥याल, नाकबाट निस्कने पानीले चाँडै फैलन्छ। यसबाट बँच्न कफ र रुघाखोकी लागेको मानिस नजिक जानुहुँदैन। अल्कोहल मिसिएका ह्यान्ड सेनिटाइजर समय समयमा हातमा लगाउनुपर्छ र साबुन पानीले हात धुनुपर्छ।
५. ह्यान्ड ड्रायरले कोरोना भाइरस मार्छ?
हात सुकाउन प्रयोग हुने ह्यान्ड ड्रायरले कोरोना भाइरस मार्दैन। कोरोनाबाट बच्न अल्कोहल मिसिएका ह्यान्ड सेनिटाइजर समय समयमा हातमा लगाउनुपर्छ र साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। त्यसपछि चाँही ह्यान्ड ड्रायर प्रयोग गर्न सकिन्छ। तौलियाले हात पुछ्नुपर्छ।
६. अल्ट्रा भायोलेट डिसइन्फेक्सन ल्याम्पले कोरोना मार्छ?
अल्ट्रा भायोलेट डिसइन्फेक्सन ल्याम्पको प्रयोग गर्नुहुँदैन। यसले छालामा समस्या निम्त्याउन सक्छ।
७. थर्मल डिटेक्टरले कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउँछ?
थर्मल स्क्यानरले बिरामी मानिस पत्ता लगाउँछ। यसले सामान्यभन्दा बढी तापक्रम भएको मानिस पहिचान गर्छ। कोरोना लागेका पनि बिरामी भएका हुनसक्छन्। तर हालै कोरोना लागेका जसलाई ज्वरो छैन त्यस्ता मानिसलाई भने थर्मल डिटेक्टरले पत्ता लगाउँदैन। कोरोना लागेको २ या १० दिनपछि मात्र मानिस बिरामी पर्छन्।
८.अल्कोहल र क्लोरिन शरीरमा छर्किए के कोरोनाभाइरस मार्न सकिन्छ?
शरीरभर अल्कोहल र क्लोरिन छर्कँदा कोरोनाभाइरस मार्न सकिँदैन। शरीरमा पसिसकेको कोरोनाभाइरसलाई मार्ने बहानामा त्यस्तो कार्य गरिए तपाइँको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। तर जमीनमा रहेका कोरोनाभाइरसलाई डिसइन्फेक्ट (संक्रमण निस्तेज) गर्न अल्कोहल र क्लोरिन प्रयोग हुन्छन्। उपयुक्त समयमा यसको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ।
९. घरेलु जनावरले कोरोना सार्छ?
अहिलेसम्म कुकुर र बिरालोजस्ता घरेलु जनावरले कोरोना सारेको त्यस्ता कुनै प्रमाण भेटिएका छैनन्। यस्ता जनावरमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन। तर जनावरहरुसँगको सम्पर्कपछि आफूलाई जोगाउन हात धुनु राम्रो उपाय हो। आत धोएमा हामी इकोली र सालमोनेलाजस्ता ब्याक्टेरियाबाट जोगिन्छौं।
१०.निमोनियाविरुद्धको भ्याक्सिनले कोरोनाबाट जोगाउँछ?
निमोकोकल र हेमोफिलर इन्फ्लुइन्जा टाइप बीजस्ता भ्याक्सिन जो निमोनियाबिरुद्ध प्रयोग हुन्छन् यसले कोरोनाभाइरसबाट जोगाउँदैन। कोरोनाभाइरस नयाँ भाइरस हो र यसबाट जोगिन नयाँ भ्याक्सिन चाहिन्छ। विश्वभरका वैज्ञानिकले यतिबेला कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन निर्माण गर्न लागिपरेका छन्। डब्लूएचओले सबै प्रयत्नलाई सहयोग गरिरहेको छ। निमोनियाका भ्याक्सिनहरुले कोरोना नियन्त्रण नगरे पनि भ्याक्सिनको प्रयोगले स्वासप्रस्वासको बिमारलाई रोकथाम भने गर्दछ।
११.नाक सफा गर्नाले कोरोनाबाट जोगिन सकिन्छ?
औषधिको सहयोगमा नाक सफा गर्नाले रुघा चाँडै निको हुने सम्भावना देखिएको छ। नाक सफा गर्नाले स्वासप्रस्वास प्रक्रियाको संक्रमण रोक्न सकिँदैन। साथै यसो गर्नाले कोरोनाबाट जोगिन सकिन्छ भनेर केही प्रमाण छैन।
१२. लसुनको सेवनले कोरोना रोकथाम हुन्छ?
लसुनमा जीवानुमार्ने गुणहरु हुन्छ। त्यसकारण यो स्वस्थ खाना हो। तर हालसम्म लसुनले कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित निको भएको प्रमाण छैन।
१३.कोरोनाभाइरसले वृद्धवृद्धालाई असर गर्छ, अथवा युवा पनि यसबाट संवेदनशील छन?
सबै उमेर समूहका मानिसहरु कोरोनाबाट संक्रमित हुनसक्छन्। तर वृद्धवृद्धा तथा आस्थ्मा, डाइबेटिज र मुटुका रोगीहरु कोरोनाबाट बढी प्रभावित भएको देखिएको छ। डब्लुएचओले सबै उमेर समूहका मानिसलाई भाइरसबाट बँच्ने उपाय अबलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। स्वासप्रस्वासको स्वच्छता तथा हात र शरीरको स्वच्छतालाई ध्यान दिनुपर्छ।
१४.कोरोना रोकथामका लागि एन्टिबायोटिक प्रभावकारी छ?
एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरिया नियन्त्रण गर्ने हो यसले भाइरस रोकथाम गर्न सक्दैन। त्यसैले कोरोना संक्रमितमा एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुहुँदैन। तर, अस्पताल भर्ना भएकाले एन्टिबायोटिक प्राप्त गर्नसक्छन् किनभने कोरोना लागेकालाई ब्याक्टेरियाको संक्रमण सम्भव छ।
१५.कोरोना रोकथाम र उपचारका विशेष औषधि छन?
आजको मितिसम्म कोरोनाभाइरसको कुनै औषधि बनेको छैन। कुनै औषधि प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छैन। तर, भाइरसबाट संक्रमितलाई उपयुक्त उपचार दिनुपर्छ, हेरबिचार गर्नुपर्छ। केही विशेष उपचारका पद्धतिहरु अनुसन्धानका क्रममा छन्। ती चाँडै परिक्षण हुनेछन्। डब्लूएचओले कोरोनाभाइरस रोकथामविरुद्धको अनुसन्धान र अभियान तिव्रताका साथ अगाडि बढाउन साझेदारहरुलाई सहयोग प्रदान गरिरहेको छ।
–यी बुँदाहरु डल्बूएचओको साइटबाट लिइएको हो।
साँढे दुई घण्टामा नतिजा दिनसक्ने कोरोना भाइरस टेष्टको किट विकास गरेको भोलिपल्ट यीनी आमा बनिन्
कोरोना भाइरस : ३० हजार ८ सय भन्दा बढीको मृ,त्यु ,६ लाख ६२ हजार संक्रमित